YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, February 18
ပါးရိုက်မဲ့သူနဲ့လူသတ်မဲ့သူနဲ့မြန်မာ့နိုင်ငံရေးစည်ကားနေတယ်
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 2/18/20140အကြံပြုခြင်း
ခြေဥပြင်ဖို့“ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်း” ကို အသုံးပြုခွင့် မပေးခဲ့ရင် ( ဦးဝင်းချို)
“(၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်လိုသော
သာမန်ပြည်သူများ၏ဆန္ဒ၊သဘောထား များအား ဟောပြော၊ဆွေးနွေးခြင်း”
ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ် နဲ့၂၃-၂-၂၀၁၄ ရက်နေ့ မနက်၁၀း၀၀ နာရီမှ နေ့လယ် ၁၄း၀၀ ထိ ဗဟန်းမြို့နယ်
ဗိုလ် စိန်မှန်ကွင်း မှာ ပြုလုပ်လိုကြောင်း လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းများဖြည့်စွက်ပြီး
ဗဟန်းမြို့နယ် ရဲ စခန်းမှူး ထံ အကြောင်းကြား ၊တင်ပြပြီးခဲ့ပါပြီ။
“ဗိုလ် စိန်မှန်ကွင်း” အသုံးပြုခွင့်ရဘို့ ရန်ကုန်တိုင်း အား/ကာ မှာ “ခွင့်ပြုချက်”
ယူရမယ်လို့ ညွန်ပြတဲ့ အတွက် ဗဟန်းရဲစခန်းကနေ ရန်ကုန်တိုင်း အား/ကာ ရုံး။
ဗဟန်းမြို့နယ် ဦးစီးမှူးရုံး ဖြစ်လိမ့်မယ် လို့ ထပ်ညွှန်တော့ “ဗဟန်း စည် ပင်ရုံး”။ အဲဒီက မဟုတ်ပါဘူး တဲ့။ “ပန်းဥယျာဉ်ဌာန” ဆိုတော့ ကန်တော်မင် ပန်းခြံထဲ၊အဲဒီ ရောက်ပြန်တော့ “တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့”ရဲ့ ခွင့်ပြုချက် ကိုပြပြီးမှ လျှောက်ရမှာ လို့ ဆိုပြန်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ “တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရ အဖွဲ့”က ခွင့်ပြုချက် ပေးခဲ့ရင် “ဗိုလ်စိန်မှန်ကွင်း” ကို အသုံးပြုခွင့် ထပ်လျှောက်ရမယ်။“ခွင့်ပြုချက်” မပေးခဲ့ရင်တော့ လျှောက်ရင်လည်းမပေးတော့ဘူး ဆိုတဲ့ သဘော။ အရင့် အရင်က ဒီကွင်းကိုဘဲ NLD ပါတီရဲ့ စည်းဝေးပွဲ တစ်ခု အတွက် အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့ပြီးပြီ။
နောက်ပြီး ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ထဲက အချို့သော ပုဒ်မ တွေကို ပြင်ဆင်လိုခြင်း မရှိတဲ့ နိူင်ငံသားများကလည်း နောက်ထပ် “ဟောပြောပွဲ” တစ်ပွဲ ကျင်းပခဲ့ပြီးပြီ။
သို့သော်လည်း လေးစားစွာ တင်ပြ၊အကြောင်းကြားခဲ့ပေမဲ
့ (ကျနော့်  ကိုမှ )အကြောင်းအမျိုးမျိုး ကြောင့် “ခွင့်ပြုချက်” မပေးနိူင်ဘူး လို့ အကြောင်းပြန်ခဲ့ရင်လည်း.............................။
တည်ဆဲ (၂၀၀၈)ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ကခွင့်ပြုထားပြီး ဖြစ်တဲ့ “နိူင်ငံသား အခွင့်အရေး” ကို မည်သူတစ်ဦး တစ်ယောက် ၊တစုတဖွဲ့ က(သမ္မတကြီးဖြစ်ပါစေ) ခွင့်မပြုတဲ့ အတွက် လုပ်ဆောင်ခွင့်မရဘူး ဆိုရင် (အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်၊အဖွဲ့အစည်းဟာ) ပြည်သူ၉၂.၄၈% က ထောက်ခံ အတည်ပြုထားတဲ့၊လက်ရှိမပြင်ဆင်ရသေးတဲ့ “ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ”ကို ဖေါက်ဖျက်ခြင်းသာဖြစ်တဲ့ အတွက် “ဥပဒေ ကိုလေးစားလိုက်နာတဲ့ ” ကျနော်ကတော့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၃-၂-၂၀၁၄ ရက်နေ့ နံက်၁၀း၀၀မှ ၁၄း၀၀ အထိ ဗဟန်းမြို့နယ် ဗိုလ်စိန်မှန် ကွင်းမှာပြုလုပ်ကျင်းပမယ့် “(၂၀၀၈) ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ကို ပြင်ဆင်လိုသော
သာမန်ပြည်သူများ၏ဆန္ဒ၊သဘောထား များအား ဟောပြော၊ဆွေးနွေးခြင်း” အခမ်းအနားကို တက်ရောက်နိူင်ပါမည့် အကြောင်း ဦးဝင်းချို နှင့်တကွ မြန်မာနိူင်ငံသားများ အရေးဆောင်ရွက်နေသူများမှ လေးစားစွာ ဖိတ်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
မြောက်ကိုရီးယား အာဏာရှင်၏အမှတ်တရမွေးနေ့ပွဲလမ်းတခြမ်းခင်းမှ ကမကထပြုကျင်းပမည်
( ယနေ့ထုတ် အဓိပတိသတင်းဂျာနယ် )
၃၇ တန်ရှိသော ကျောက်စိမ်းတုံး တွေ့ပြီးနောက် ဖားကန့်ဒေသတွင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်တူးဖော်မှု ကန့်သတ်
February 18, 2014 at 8:50am
““ကျောက်စိမ်းတုံးကြီးတွေ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ဝေခါဘက်ကို တစ်နိုင်တစ်ပိုင်သမားတွေ အ၀င်မခံတော့ဘး။ မမုံတို့၊ ဆိပ်မူတို့ဘက်မှာလည်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင်သမားတွေကို ဒေသခံရဲနဲ့ တပ်မတော်သားတွေ ပေါင်းထားတဲ့အဖွဲ့က ဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာတွေလုပ်နေတယ်”” ဟု ဖားကန့်မြို့နယ် ဆိပ်မူတွင်နေထိုင်သည့် ရွှေဘိုဒေသမှ လာရောက်ကာ ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်ဒေသရှိ ကုမ္ပဏီပိုင် ကျောက်စိမ်းတွင်း တစ်ခုတွင် ကျောက်တူးဖော်သော လုပ်သားအချို့ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေသည်ကို ၂၀၁၃ ဇူလိုင်လက တွေ့ရစဉ် ဓာတ်ပုံ - စိုးဇေယျာထွန်း/ ရိုက်တာ
ကချင်ပြည်နယ် ဖားကန့်မြို့နယ် ဝေခါကျောက်မျက်မှော်တွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်က ၃၇ တန်ရှိသည့် ကျောက်စိမ်းတုံးကြီး တွေ့ရှိပြီးနောက် ဝေခါမှော် အပါအ၀င် ဖားကန့်ဒေသရှိ ကျောက်မျက်မှော်အချို့တွင် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ကျောက်မျက်ရှာဖွေသူများအား ကျောက်တူးခြင်းမပြုရန် ဒေသအာဏာပိုင်များနှင့် တပ်မတော်မှ တားဆီးကန့်သတ်မှုများ ပြုလုပ်နေကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဝေခါမှော်နှင့် အနီးဝန်းကျင်ရှိ ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးလုပ်ကိုင်သည့် မှော်များတွင် ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် တပ်မတော်သားများ လုံခြုံရေးအပြည့်ချထားပြီး တစ်နိုင်တစ်ပိုင်ကျောက်မျက်တူးဖော်သူများ၊ ရေမဆေးကျောက် ရှာဖွေသူများအား ကျောက်မျက်တူးဖော်ရှာဖွေခြင်း မပြုရန် တားမြစ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
အခြားမှော်များဖြစ်သည့် ဆိုင်းတောင်၊ ဆိပ်မူ၊ မမုံ၊ မှော်ဆီဇာ စသည့် ကျောက်မျက်လုပ်ကွက်များတွင်လည်း တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ကျောက်တူးသူများနှင့် ရေမဆေးကျောက်ရှာသူများအား တားဆီးကန့်သတ်မှုများရှိပြီး မကြာခဏ ဖမ်းဆီးငွေညှစ်ခြင်း၊ ဖမ်းဆီးပြီး မိုးကောင်းမြို့သို့ ပြန်ပို့ခြင်းများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ဖားကန့်ဒေသခံများနှင့် ကျောက်မျက်တူးဖော်နေသူများက ပြောသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်တွင် ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီများနှင့် လွတ်ကင်းသည့်နေရာမှ ၃၇ တန် အလေးချိန်ရှိသည့် ကျောက်စိမ်းတုံးကို တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ကျောက်မျက်ရှာဖွေတူးဖော်သူများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထိုသို့တွေ့ရှိပြီးနောက် ကျောက်စိမ်းတုံးကို ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ဖားကန့်ဒေသ ကျောက်စိမ်းကျောက်မျက်ရုံးမှ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားကြောင်း ဖားကန့်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကပြောသည်။
တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ကျောက်မျက်ရှာဖွေသူများမှာ ကျီးလန့်စာစားဖြစ်နေရပြီး မကြာခဏ ဖမ်းဆီးငွေညှစ်ခံရခြင်း၊ ဖမ်းဆီးပြီး ကားပေါ်တင်ကာ မိုးကောင်းမြို့ သို့ အပို့ခံရခြင်းများ ကြုံတွေ့နေရသည်ဟု ဖားကန့်ဒေသတွင် နေထိုင်သူများက ပြောသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၂ နှစ်ကျော်က မြန်မာစစ်တပ်နှင့် ကချင်လွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KIA တို့ ကြား ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲများကြောင့် ဖားကန့်ဒေသရှိ ကျောက်မျက်တူးဖော်ရေးလုပ်ကွက်များနှင့် ကုမ္ပဏီများ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းထားရန် သတ္တုတွင်းဝန်ကြီးဌာနက တားမြစ်ထားသည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်ပင် ဖားကန့်ဒေသ၌ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းမှ လာရောက်နေထိုင်ပြီး ကျောက်ရှာဖွေသူ တစ်သိန်းခန့်ရှိသည်ဟု ဖားကန့်မြို့ခံများက ပြောသည်။
သို့သော် လက်ရှိအချိန်တွင် အဆိုပါ အခြေခံလူတန်းစား တစ်နိုင်တစ်ပိုင်များကို ဒေသခံရဲတပ် ဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်သားများက ပူးပေါင်းဖမ်းဆီးသဖြင့် ငွေကျပ် သောင်းဂဏန်းမှ သိန်းချီပေးကာ ပြန်လည်ရွေးယူရခြင်း၊ မိုးကောင်းဘူတာရုံသို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ခံရခြင်း စသည်များကြောင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင်သမားများ အလွန်ဒုက္ခတွေ့နေသည်ဟု ဖားကန့်မြို့နယ် NLD ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှေသိန်းက ပြောသည်။
(လျှပ်တစ်ပြက်သတင်းဂျာနယ်အတွဲ (၄) အမှတ်(၇၀) )
သတင်းအရင်းမြစ် နေပြည်တော် သတင်းမှန်ဖြစ်ပါသည်….
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်မှ နိုင်ငံတော်ကြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် တည်ဆောက်နေသော ကာလတွင် လက်ရှိ အစိုးရ၏ ဖေါင်းပွစွာခန့်အပ်ထားသော ၀န်ကြီးပေါင်း ၁၂၆ ယောက် တို့သည် နိုင်ငံတော်အား သံလက်သီးများဖြင့် အုပ်ချုပ် အကြမ်းဖက်ခဲ့သော စစ်ဗိုလ်ချုပ်များအားလုံးနီးပါးက အစိုးရတစ်ရပ်လုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံတွင် ပြန်လည်ပါဝင်ပတ်သက်ကာ အာဏာကို ပုံစံတမျိုးဖြင့် ဆက်လက်ကိုင်စွဲ ကျင့်သုံးနေသည်ကို အထင်ရှား မြင်နိုင်ပါသည်။
ယခု လောလောလတ်လတ်မှာပင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ရေလုပ်ငန်းနှင့် မွေးမြူရေး ၀န်ကြီး ယခင် ဗိုလ်ချုပ်အုန်းမြင့် ယခု ၀န်ကြီး ဖြစ်နေလေသည်။ အကြောင်းမှာ အနာယူသွားသည်ဟု နိုင်ငံတကာမှ လက်ခံထားသော စစ်အာဏာရှင် ဗိုလ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ယခု ဦးသန်းရွှေမှ ၄င်း အနားယူမှု မတိုင်ခင် ၂၀၀၉ ခုနှင့် ၂၀၁၀ ကာလ၀န်းကျင် တလျောက်လုံးတွင် ၄င်း၏ လက်မရွံ့ နောက်လိုက်များအား နေရာအလိုက် ဌာနအလိုက် စနစ်တကျ ပင့်ကူအိမ်ကဲ့သို့ အာဏာဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားရေးအား အစီမံများ ပြုလုပ်ကာ ၂၀၁၁ မေလ ၂၉ တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေမှ ၄င်းအပါအ၀င် အစီစဉ်ပြုလုပ်ထားသော စစ်ဗိုလ်ချုပ်များအား အရပ်ဝတ် လဲပြောင်းဝတ်စေ၍ အသေချာ နေရာချထားခဲ့ခြင်း အကြောင်းကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုသော စကားလုံးဖြင့် အတိုက်ခံနှင့် နိုင်ငံတကာအားမက်လုံးပေးကာ ပျာရည်နှင့် ၀မ်းချထားသော နိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းတခုဖြစ်နေလေသည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ရုံးမှ ၀န်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်အာ ပုဂ္ဂိုလ်ေ၇းအရ သမ္မတ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးရဲထွဋ်မှ တယ်လီဖုန်းဖြင့် “ ဗိုလ်ချုပ် …ဗိုလ်ချုပ်သတင်းတွေ တက်နေတယ်၊ ကျနော်တို့အနေနဲ့ကတော့ အဲဒါတွေကို ပြန်ဖြေဖို့ မီဒီယာတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ရှောက်ရှားနေပါတယ်” ဟု ပြောခဲ့လေသည်။ ၀န်ကြီးအုန်းမြင့်မှ “ဟေ့ ..ရဲထွဋ် .. ငါဘာကောင်လဲဆိုတာ မင်းသိသားပဲ..ငါ ဖြတ်သန်း တွေ့ကြုံနေတာနဲ့ ငါပြောတာလေ ဘာတွေများ ငါက မဟုတ်မဟ ပြောခဲ့လို့လဲ..” ဟု တဖက်မှ လေသံတင်းတင်းဖြင့်ပြန်ပြောလေ၏။ ထိုအခါ သမ္မတ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်မှ “ဟုတ်ပါတယ် ဗိုလ်ချုပ်..ကျနော် ပြောတာက ဗိုလ်ချုပ်ကို ယိုစွတ်နေကြတာကို အချို့မီဒီယာတွေ ကျနော်တို့ဘက်လှည့်လာလို့ ရှောင်နေတဲ့သဘောကို ပြောပြတာပါ” ဟု ဆိုလေသည်။
စာဖတ်သူများ စဉ်းစားကြည့်နိုင်ပေမည်.. သမ္မတရုံးပြန်ကြားရေး လုပ်နေသူ ဒုဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်မှာ တပ်မတော်တွင် ဗိုလ်မှုးအဆင့်မျှလောက်သာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ အစီစဉ်အရ အရပ်ဝတ်လဲလာခဲ့ကြပြီး လက်ရှိ ၄င်းတို့၏ အတွင်းစည်းအတိုင်း ၀န်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်အား ဗိုလ်ချုပ်ဟုပင် ဆက်လက်ခေါ်ဆိုနေရသောကြောင့် ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရ ခက်နေပေသည်။
ထို့အပြင် ၀န်ကြီးအုန်းမြင့်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်း ၄င်းအား မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်း တာဝန်ပေးပြီးချိန်မှစ၍ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ကျေးလက်ဒေသ ရေရရှိနှင့် တနိုင်တပိုင်မွေးမြူရေး လုပ်ငန်းအတွက် နိုင်ငံတော်မှ ချပေးထားသော ပြည်သူ့ အခွန်ငွေများမှ သိန်းပေါင်း ၃၅၈၂ သိန်း၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် သိန်းပေါင်း ၄၁၄၈ သိန်း၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် သိန်းပေါင်း ၅၈၆၂ သိန်း တို့အား အသီးသီး အသုံးပြုပြီးသည့်အပြင် ယခု ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင် ကျပ်သိန်းပေါင်း ၇၇၃၂ သိန်းအား ဆက်လက်အသုံးပြုရန်ရှိနေလေသည်။
၀န်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်မှ သိန်းပေါင်းများစွာ ပြည်သူ့ငွေများအား သုံးစွဲခဲ့ပြီးသော်ငြားလည်း လက်ညိုးထိုးပြလောက်အောင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပြည်သူများအတွက် ရေးတွင်းအနည်းငယ်နှင့် မဖြစ်စလောက် ဘဲခြံ ၊ ၀က်ခြံ နှင့် ငါးကန်ပေါင်း ၁၄ ကန်သာ မျှသာ ၇ှိခဲ့သည်။ ထိုကြောင့်ဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်အနေနှင့် မည်သည့်နေရာတွင် နိုင်ငံတော် မှ ပြည်သူ့ငွေများအား သုံးစွဲကြောင်း စာရေးသူ အရေးပေါ် စုံးစမ်းခဲ့လေသည်။
၀န်ကြီးအုန်းမြင့်သည် လက်ရှိ နာမည်ဆိုးဖြင့် ကျော်ကြားနေသော ဦးအောင်သောင်း၊ ဦးအောင်သိန်းလင်း၊ ဦးဥာဏ်ဝင်း(ပဲခူးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်)၊ ဦးသာအေး (စစ်ကိုင်းတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်) တို့နှင့် တဖွဲ့တည်းဖြစ်ပြီး၊ ဦးအောင်သောင်း၊ ဦးဌေးဦး ၊ ဦးစိုးသိန်း တို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေအိမ်သို့ လစဉ် သွားရောက် ဂါရ၀ ပြုလေတိုင်း ပါဝင်သူဖြစ်လေ၏။
၂၀၁၁ ဂျွန်လမှပင် ၀န်ကြီးဦးအုန်းမြင့်မှ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဟောင်း ဦးသန်းရွှေ၏ မိသားစုများ အဓမ္မသိမ်းယူထားသော လယ်ယာမြေပေါင်း ၉၆၉၀ဧက အား စိမ်းလန်းစိုးပြေရေးအတွက် နိုင်ငံတော် မှချပေးထားသော ဘတ်ဂျက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်နေလေသည်.။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း မိသားစုသည် တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်း ၄၈၄ ဧက၊ မွန်ပြည်နယ်တွင် ၇၅၂ ဧက ၊ ပဲခူးတိုင်းအတွင်း ၃၂၂ဧက ၊ မန္တလေးတိုင်းအတွင်း ၁၂၆၅ ဧက ၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ၁၅၅၀ဧက ၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ၂၃၆၈ ဧက၊ ဧရာဝတီတိုင်းအတွင်း ၂၅၄၀ ဧကနှင့် ကချင်ပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ်တို့တွင် အတိကျမသိရသေးသော်လည်း ၄င်းမိသားစုပိုင်မြေဧက အမြောက်များရှိနိုင်သည်ဟု အတွင်းစကားကြားရလေသည်။
၀န်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်မှ အာဏာရှင်ကြီး ဦးသန်းရွှေ၏ မြေယာစိုပြေရေးအတွက် အဆိုပါ အာဏာရှင်၏မိသားစုပိုင်ဟု မတရားသတ်မှတ်ထားသော ရော်ဘာခြံ၊ သရက်ခြံ ၊ သီခိုခြံ ၊ ဇီးချိုသီးခြံ ၊ ဒညင်းသီးခြံများအပြင် အခြားသော တန်ဘိုးကြီး ပန်းဥယျာဉ်များရှိပြီး ၄င်းခြေနေရာမျာတွင် နိုင်ငံတော် ငွေဖြင့် ရေသန့် ရေတွင်းများ ငါးကန်များ မွေမြူရေးအဆင့်မြင့်ခြံများကို မျက်နှာလို မျက်နှာရဖြင့် တည်ဆောက်ပေးထားသည်မှာ ခန့်မှန်းခြေ သိန်း ၅၈၀၀ မှ သိန်းပေါင်း ၇၀၀၀ ကျော်ထိ ရှိနိုင်သည်ဟု သိရ၏။ သို့ကြောင့် ဦးသန်းရွှေ၏ မိသားစုမှ အထူးအလေးပေးခြင်းခံရသော ဥယျာဉ်မှူး ၀န်ကြီး တဦး ဖြစ်နေလေ၏။
ထိုကြောင့် ၀န်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်သည် ၄င်း၏ အနောက်တွင် ၄င်းတို့၏ အခေါ်အရ ဘဘရွှေ ကြီး ရှိနေသည်ဟု မကြာခနပြောဆိုတတ်ပြီး ဘဘရွှေမိသားစုအတွက်သာ ပြည်သူ့ငွေများအား ဆက်လက်သုံးစွဲပြီး ပြည်သူများအတွက် သုံးစွဲနေကြောင်း အသံကောင်းဟစ်ထားခဲ့လေသည်။
ယခု ၄င်းဝန်ကြီး ဦးအုန်းမြင့်အား မိုက်ရိုင်းခက်ထက်စွာ အများပြည်သူများအား ဆက်ဆံပြောဆိုသော ၀န်ကြီးတဦးအား အရေးယူသည့် အနေဖြင့် နေရာရွှေပြောင်းရန် သို့မဟုတ် အနားပေးရန် အတော်ပင် အခက်တွေ့နေကြကြောင်း သမ္မတရုံးအတွင်းသတင်းမှ ရရှိပါသည်။ သို့ကြောင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသည် မည်မျှ စစ်မှန်သည်ကို နိုင်ငံတကာနှင့် လွှတ်တော်တွင်းသို့ရောက်၇ှိနေပြီဖြစ်သော ယနေ့နိုင်ငံရေးပါတီ၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စာလှယ်များ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနှင့် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူးများနှင့် အများပြည်သူများအဖို့ ကြီးကြီးမားမား သံသယ ရှိနေကြပြီး မလွဲသာလို့ လိုက်ရသည် ဆိုသော စကားကဲ့သို့ပင် အောင်အီးမွန်းကြပ်စွာဖြင့် ဆက်ဆံနေကြကြောင်းပါ……….
စာ ပေ ဟော ပြော ပွဲ များ အား ပိတ် ပင်မှု ၈၈ မျိုး ဆက်(ငြိမ်းပွင့်)၏ သ ဘော ထား ကြေ ညာ ချက်
သမီးလေး၇ွာသူ၊၇ွာသားများ မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံအနီးတွင် ယနေ့နေလည်ကဆန္ဒပြ
ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် မြန်မာပြည် တ၀န်းနေထိုင်သော ကမန်တိုင်းရင်းသား ဦးရေမည်မျှရှိသည်ကို စစ်ဆေးပေးရန် စစ်တွေမြို့မိ မြို့ဖများက ယခုလ ၁၄ ရက်နေ့က နိုင်ငံတော် သမ္မတထံ စာရေးတင်ပြ တောင်းဆိုလိုက်သည်ဟု သိရသည်။
ယခုအခါ ဘင်္ဂလီလူမျိုးများက ကမန်တိုင်းရင်းသားအဖြစ် နိုင်ငံသားကဒ်များကို လိမ်လည်ကိုင်ဆောင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့သို့ ခိုးဝင်နေကြသဖြင့် ကမန် ဦးရေမှာ မူလစာရင်းထက် အထူး ဖေါင်းပွနေသည်ဟု သိရသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ထိ ပြည်သူ့အင်အား ဦးစီးဌာန ခန့်မှန်းတွက်ချက်မူအရ ကမန်တိုင်းရင်းသား လူဦးရေမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် စုစုပေါင်း ၈၉၂၁ ဦးရှိကြောင်း သိရသည်။
အတည်မပြုသော စာရင်းအရ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကမန်လူဦးရေမှာ (၂) သိန်းအထိ တိုးပွားနေကြောင်း သိရသည်။
သောင်းဂဏန်းသာရှိသော ကမန် လူဦးရေမှာ ယခုအခါ သိန်းဂဏန်းထိ တိုးလာသဖြင့် ၎င်းမှာ မှားယွင်းမူ တစ်ရပ်ဖြစ်နေသည်ဟုဆိုကာ စစ်ဆေးပေးရန် စစ်တွေမြို့မိ မြို့ဖများက ထိုသို့ စာရေး တောင်းဆိုလိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အာဏာရှင် လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပြန်သွားချင်နေကြတာလား။ မသီတာ (စမ်းချောင်း)
ပြီးခဲ့တဲ့လက ပေါင်းတည်မှာ လုပ်မယ့် စာပေဟောပြောအတွက် ဖိတ်ကြားခံရတဲ့ မသီတာ (စမ်းချောင်း) ကို မျိုးစောင့်ဥပဒေ မထောက်ခံတဲ့အတွက်၊ မူဆလင် ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးရုံမှာ လုပ်အားပေးတဲ့အတွက် ဟောပြော ခွင့်မပြုနိုင်ဘူး လို့ ဒေသခံ သံဃာတစ်ချို့က ကန့်ကွက် အကြပ်ကိုင်တာကြောင့် စီစဉ်သူတွေ ကနေ ဟောပြောပွဲ ဖျက်သိမ်းပေးလိုက်ရပါတယ်။ ခုတလော အဲလို အဖြစ်အပျက် မျိုးတွေ ခပ်စိတ်စိတ် ဖြစ်လာနေပြီပါ။ ဘယ်လို ဖြစ်တာပါလဲ၊ ဒါဟာ ဘာသဘော ဆောင်တာပါလဲ၊
“ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ လွတ်လပ်စွာ ဟောပြောခွင့်၊ ဘယ်လို ကာကွယ်ရမလဲ ”
မြန်မာပို့စ်ဂျာနယ်၊ ၁၇-၂-၁၄။ မျက်နှာဖုံးဆောင်းပါး။
Nay P Latt's status.
မန္တလေးက စာပေဟောပြောပွဲကို သင်္ကန်းရုံထားသူအချို့(ဘုန်းကြီးဟူသည့်ဝေါဟာရ မသုံးချင်ပါ) လာတားတဲ့ ဗွီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်နေရင်း ကျနော်စဉ်းစားခန်းဝင်မိတယ်။ ကျနော်သာ အဲဒီ့နေရာမှာဆို ဘာလုပ်မလဲပေါ့ ...။ သေချာတာကတော့ ... စာရေးဆရာတွေတက်ဟောခွင့်ရှိတဲ့ စင်မြင့်ပေါ်မှာ စာရေးဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ကိုမြအေးက လူလူချင်းအတူတူ ဘာလို့ ဟောခွင့်မရှိရတာလဲ ဘုရား(ဒီနေရာမှာ ကိုမြအေးရဲ့ဟောပြောချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လက်မခံနိုင်လို့ မဟောစေချင်တာမျိုးဆိုရင် ကျနော် နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်)၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်တစ်ခုတည်းနဲ့ လူတစ်ယောက်ကို လူအဖြစ်ကနေနှိမ်ချဆက်ဆံတဲ့လုပ်ရပ်မျိုးကို ဗုဒ္ဓကအားပေးပါသလား ဘုရား ... စသဖြင့် မေးခွန်းတွေများစွာမေးချင်မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့နေရာမှာဆိုရင်တော့ ကျနော် မေးရဲပါ့မလား မသေချာပါဘူး။ ဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်းကို အားပေးတဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် စစ်စစ်တွေ၊ သံဃာတော်အစစ်တွေဆိုရင်တော့ ကျနော့်ရဲ့မေးခွန်းတွေကို မေတ္တာရှေ့ထားပြီး ကျနော် နားလည်တဲ့အထိ ဖြေကြားပေးမှာ သေချာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ့နေရာမှာ "မြအေးကိုဖယ်ပေး"ဆိုတဲ့ အမိန့်ကိုမနာခံပဲ အဲဒီ့လိုမေးခွန်းတွေသွားမေးရင် ကျနော်ဘာဖြစ်သွားမလဲ။ မသေချာပါဘူး။ ကျနော်သာ ပွဲစီစဉ်သူဆို ပွဲကိုဖျက်လိုက်ရမှာပါပဲ။ ကျနော်သာ အတူပြောရမယ့် စာရေးဆရာဆိုရင် ကျနော်လဲ မပြောတော့ဘူးလို့ ပြောလိုက်ရမှာပါပဲ။ ကျနော်သာ စာချစ်သူ ပရိသတ်ဆိုရင်တော့ ဝမ်းနည်းခြင်း ကြီးစွာ၊ ရှက်ရွံ့ခြင်းကြီးစွာနဲ့ လှည့်ပြန်လာရမှာပါပဲ။
အခုလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျနော် ရှက်ရွံ့နေမိပါတယ်။
နိုင်ငံရေးအရ တိုက်ခိုက်ရေးဆိုတာ နေ့စားတွေ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဖွတ်တွေ မသိလေရော့သလား
ကျမတို့က အမှန်တရားပေါ်မှာ အခြေခံပြီးတော့မှ လှုပ်ရှားရမယ်၊ စည်းရုံးရမယ်၊ လုပ်တဲ့အခါမှာ သိက္ခာ ရှိရှိနဲ့ အဆင့်မြင့်မြင့် လုပ်ပါ။ ဖြစ်သလို၊ ရန်တွေ့သလို ကလေးတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ရိုက်သလို နျက်သလို အဲလိုမျိုးပုံစံ လုံးဝ မလုပ်ပါနဲ့၊ ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့သိက္ခာ၊ ကိုယ့်ရဲ့ အဖွဲ့အစည်းရဲ့သိက္ခာကို ထိန်းသိမ်းပြီးတော့ မှန်ကန်တဲ့ နည်းနဲ့လုပ်ပါ၊ ဒီဟာက သိပ်ပြီးတော့ အရေးကြီး တယ်၊ အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းမို့ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ ဥပဒေဘောင်အတွင်းက လုပ်ဖို့ က အင်မတန်မှ အဓိကကျပါတယ်။
နေပြည်တော် ၊ ၁၈.၂.၂၀၁၄ ။